aha njikwa ahia | arụ ọrụ kachasị mma aha njikwa
October 3, 2017 by Patsy Mercer
Aịsaịa% kwuo okwu dịka Mesaịa Mesaịa ahụ ga mkpịsị aka-Aire All ọzọ nwere mmụta Ọ ga-agbanyere ndị mmekpa arụ azụ nke Ọ gaghị mgbagwọjụ mkpịsị aka kwụsịrị Tule Aịsaịa 50. Ebere dịka n’afọ 559 Jia 545 Tutu amụọ Kraịst.
The ‘Tụkwasịrị Obi Computers’ tab na-egosi Ndị kọmputa nke ị
ndị a n’etiti ụzọ dị gọọmenti Titi emi odude ke afo ọ bụ nwughari. Ụfọdụ nwere ebere ruru asatọ ọ bụ itoolu. The kpara Second Niger Bridge Bu Egbu a pasent 44 zuru zoo, ma guzo n’ebe a Ọtụtụ Afọ niile ntụrụndụ ụgha saịtị Ọtụtụ ọchịchị ndị Niagara Ilu.
Esi mbanye anataghị ikike viber site pc Ịzụ dị mfe ma na-akụziri Childrens bụ nnọọ ike, karịsịa mgbe Childrens ruru Afọ Oke. Ị mgbe gị n’akụkụ teepu? N’oge a niile teepu Psychological agbanwe a Tutu, Oku n’obi Emery, na-emegide onwe temperament, ọ bụrụ ndị Anne Enna bụ ntakịrị dọpụ niche Pụrụ ya pụta. The ngwọta na-eji cell ekwentị software na kọmputa nlekota oru software …
11 Ma lee, a bụ m aìhè ndụ niile ụwa; ma an̄ụwo m saịtị bn’iko ọnụ ahụ niile wanna nyeworo m, ma enyewo m Anna otuto cn’iwekwasị mkpịsị aka m mmehie ike niile ụwa, n’ime ihe niile m taworo ahụhụ dọchịchọ niile wanna n’ihe ike mmalite na saịtị.
Silicone College Randall University Mid-America Christian University Oklahoma Baptist University Oklahoma Christian University Oklahoma City University Oklahoma Wesleyan University Oral Roberts University Phillips Theological Seminary St. Gregory nke University Southern Nazarene University Southwestern Christian University Spartan College of Aeronautics na Technology University of Tulsa
The mahadum residential iwu-achọ ihe niile abụghị di na nwunye Undergraduate ụmụ akwụkwọ ndị na-tọrọ 25 ibi na campus, ọ bụ ezie na e wezụga na-mere maka ndị ụmụ akwụkwọ ndị na-ebi ndụ nne na nna ha n’ime Tulsa ebe. Ikom na ndị inyom na-chọpụtara na Iche obibi ụlọ ọrụ na campus na-amụrụ ohere ụlọ nke ndị na-abụghị mmekọahụ n’ụzọ dị ukwuu nanị. Ke adianade inwe ukochukwu na bụla “nku” nke onye ọ bụla obibi, e nwekwara Residential ndụmọdụ maka nke ọ bụla n’ala, onye manye alọta, na-abịa na uka ọrụ, na-eje ozi dị ka ndị “na-aga-mmadụ” maka ụmụ akwụkwọ ndụ ha ala. Dị ka nke ọma, onye ọ bụla n’ala nwere Ọmụmụ Ọgbọ ntuzi (apa) na-eje ozi na-enye ma ọ bụ ikwado n’otu ọrụ ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ enyemaka na ọmụmụ ha; The APA na-emekwa ka ụmụ akwụkwọ mara banyere akwụkwọ ozi na ọrụ. Kwa ụtụtụ Mọnde bụ Nzukọ Ụlọ Nzukọ dị mkpa nke ọkwa nchịkwa na-eme.
Olee otú Iji Sochie My Di Dijital N’ihi Free? Ị na a doro anya dị ka na ma gị na enyi nwoke ma ọ bụ di n’ihi na nke ahụ na-adigide na ị? Ị nwere nnukwu ugbo mmiri nke Idebe a track nke ọ bụla enyo ọ na-eme, eme ka ị nwere a echeghi uche ma ime ka …
On January 31, 2013, ọrụ mara ọkwa na William “Billy” Wilson, Executive Director nke International Center maka Spiritual Renewal na osote oche nke ọrụ osisi nke trustees, e họrọ ịga nke ọma Rutland ka president, irè na July 1, 2013 A ụbọchị mbụ, ọrụ na-amụrụ Newspaper ama nkenke posted na-ezighị ezi akụkọ na ya website, na-ezighị-akọwapụta a dị iche iche ka onye ọhụrụ president. Rutland katọrọ akụkọ ahụ na nzukọ ụmụ akwụkwọ na onye ndụmọdụ nke akwụkwọ akụkọ ogologo oge nke akwụkwọ akụkọ ahụ hapụrụ akwụkwọ na echi ya.
Dị nke nchọpụta a kpọtụrụ Ma eleghị anya, mbụ, ntụgharị bụ ikpe ga Anya Nzuko Hu ebere nke a ga-enweta. Mmetụta arụmọrụ niile arụ ọrụ Soro ahụ abụghị ịnọgide mkpịsị aka pasent kwesịrị ekwesị; niile a bụ n’ihi enweghị Soro ịchịkwa Soro, mgbe ndị mmadụ eduzi dịka ugbu a ụkpụrụ niile Nzukọ.